Nhumbi dzaMwari: 6 Zvikamu Zvakatsanangurwa uye Zvinoreva?
Unoziva here Nhumbi dzokurwa nadzo dzaMwari?
Sezve muhondo, uko varwi vanoda nhumbi dzakakosha senge mabulletproof, maheti ekudzivirira misoro, zvombo uye zvimwe zvekushandisa.
En nyika zvemweya, isu tinodawo nhumbi yekuzvidzivirira inotidzivirira uye inotibatsira kutarisana nematambudziko ese angangomuka muhupenyu.
Mushoko raMwari, kunyanya muchitsauko chekupedzisira chevaEfeso, imwe yetsamba dzakanyorwa nemuApostora Pauro, inokurudzira vatendi vese kushandisa zvombo zvaMwari kurwisa wakaipa uye kuti vakunde.
Nyika yemweya iri muhondo yenguva dzose ndosaka tichifanira kuva takagadzirira nguva dzese.
1 Zvikamu zenzira yaMwari
1.1 1: Bhanhire rechokwadi
1.2 2: Chidzitiro chechipfuva chekutongwa.
1.3 3: Kugadziriswa kwevhangeri
1.4 4: Nhovo yekutenda munhumbi dzaMwari dzokurwa
1.5 5: Ngowani yoruponeso muArmadhi yaMwari
1.6 6: Ibakatwa reMweya mune Mhare yaMwari
Zvikamu zenzira yaMwari
Iyi nhumbi yezvombo inosanganisira akateerana ezvemweya zviridzwa kuti, kuti uzive mashandisiro azvo
1: Bhanhire rechokwadi
Bhanhire rechokwadi rakatumidzwa muna VaEfeso 6:14. Panyama uye munguva dzekare, mauto aipfeka bhanhire kuitira kuti nguo iyi irambe yakasimba asi ichitsigira muviri.
Mupfungwa yemweya, bhandi rinova iro ruzivo nekuchengetedza izvo zvinoita kuti timire takasimba, tine chokwadi chekuti tiri vana vamwari, kunyangwe iye wakaipa achida kutiedza neimwe nzira.
Kuti tishandise nemazvo bhandi rechokwadi moyo wedu unofanirwa kuzadzwa neshoko raIshe tinofanira kuzvisimbisa nemunamato. Tinofanira kurarama hupenyu hwakazara munzira yaKristu.
2: Chidzitiro chechipfuva chekutongwa.
Sezvenguva dzekare pakanga paine nhumbi dzokurwa nadzo, dzaivharidzirwa nhengo dzemukati, sezvatinoziva sevolletproof vest.
Varwi vanofamba munyika yemweya vanofanirwa kuchengetedza moyo yedu kubva pakurwiswa nevavengi.
Chidzitiro chechipfuva chekutongwa chinova icho chifukidziro chinotipa Kururamisira izvo zvatinozadzisa kuburikidza naJesu uye nekuzvipira kwaakatigadzirira isu muchinjikwa weCalvari.
Kuti tizvishandise nemazvo isu tinofanira kuyeuka hunhu hwatinahwo muna Kristu, ziva kuti nekuda kwechibayiro chake ndechekuti tinoruramiswa pamberi pababa vekudenga.
Hatigone kutenda izvo izvo muvengi anotiudza kana izvo zvavanopomera kana kurangarira hupenyu hwedu hwekare kana zvivi zvedu.
Aya ndiwo mazano ewakaipa kuti atikuvadze uye chete chidzitiro chechipfuva cheruramisiro chinotidzivirira kubva pakurwiswa uku.
3: Kugadziriswa kwevhangeri
Hondo yega yega inofanirwa kuchengetedza tsoka kubva pakurwiswa nekuti izvi zvakare ndizvo chakakosha muvengi.
Kana musoja asina kusimba mukufamba kwake zviri nyore kuti abvise. Varwi vanofanirwa kutora nhanho dzakasimba uye dzakachengeteka, vasingazeze kana kutya.
Shangu dzeevhangeji dzinofanira kupfeka zvakachengeteka, vimba zvawaka kupihwa naShe, ramba wakasimba munzira.
Zadza iwe nerunyararo, mufaro nerudo uye bvumira izvi kupararira kune vakakukomberedza. Iko kudana ndiko kuparidza Vhangeri kuchisikwa chose.
Nematanho akachengeteka anogara achitarisa kuti asapinde pane chero mine kana chero chinhu chakapinza icho muvengi chaangasiya munzira. Kugara uchifambira mberi uye kusambotsigira, kukura muumambo hwaMwari.
4: Nhovo yekutenda munhumbi dzaMwari dzokurwa
Pano mupostora Pauro anotisiira mirairo yekushandiswa kweshoko rerutendo. Isu tinoziva kuti nhovo chombo chekudzivirira chinogona kutibatsira muhondo zvekuti hapana kurwiswa kunosvika kwatiri.
Munyika yemweya tinodawo nhoo nekuti muvengi anokanda mabara ayo, kana akatisvikira, anogona kutikuvadza zvakanyanya.
Nhovo yekutenda inoshandiswa nenzira kwayo kana kutenda kwedu kwasimbiswa. Neizvi tinofanirwa kuverenga izwi raMwari, kuritungisisa uye, kunyanya kukosha, kurishandisa.
Ngatiyeukei kuti kutenda kwakafanana nemusuru kuti kana ikasashandiswa ipapo atrophies, isu ngatiitei rutendo uye tisimbise kuti hutidzivirire kubva pakurwiswa kwatinoitirwa newakaipa.
5: Ngowani yoruponeso muArmadhi yaMwari
Ngowani ngowani inodzivirira musoro weuto. Imwe yezvikamu zvakakosha zvezvombo zvese.
Pfungwa dzedu inhandare yechokwadi yehondo uye iri nyore kunangwa kumuvengi nekuti inorwisa zvakananga mupfungwa dzedu dzichiita zvisina kunaka kana kutiita kuti titende zvinhu zvisina kukodzera zvinoenderana neshoko raIshe.
Tinoshandisa ngowani kana ngowani yeruponeso kana tichiyeuka nguva dzese kuti tinoponeswa kuburikidza nekutenda uye ichi ichokwadi chisingagoni kushandurwa.
Tinofanira kurwa uye kurwisa pfungwa dzakaipa neshoko raMwari nekuti anotida uye akatikanganwira zvivi zvedu zvese.
6: Ibakatwa reMweya mune Mhare yaMwari
Pano pane mutsauko mukuru nekuti izvo zvimwe zvombo ndezvekuchengetedza isu asi izvi zvakakosha nekuti zvakagadzirwa kuti tikwanise kurwisa masimba ezvakaipa. Nebakatwa tinogona kukuvadza nekuuraya muvengi nguva dzese dzatinoda kupinda munzira yedu.
Nayo tinokwanisa kuzvidzivirira uye kupepuka nzira yatinofamba nayo, tine chokwadi chekuti ine simba uye kuti, kana tichiziva nzira yekuishandisa, tichawana kukunda.
Kuti tishandise nemazvo bakatwa reMweya tinofanirwa kuzadzwa neshoko raMwari nekuti iro pfumo rinoiswa kana tichitaura izwi rake. Zvakakosha kuti tikwanise kuzvishandisa zvinobudirira mune ese mamiriro ezvinhu uye patinozviita zvinoshanda muhupenyu hwedu.
Rangarira kuti Bhaibheri rakaita sebhuku rehupenyu uye kuti mazwi aya ave nesimba tinofanirwa kuita zvinhu zvinoratidzwa ipapo.
Nhumbi dzese dzeMweya dzinoshanda kuburikidza nekutenda uye dzinosimbiswa mukati yemunamato.
Patinonyanya kuverenga shoko rake, ndipo patichava nekutenda kwakawanda uye tichakwanisa kushandisa nhumbi dzokurwa nadzo zvakanyanya. Munamato ndiyo kiyi yezvinhu zvese, kuwadzana neMweya Mutsvene kunotitungamira kuti tirarame zvinoenderana nekuda kwababa vekudenga.
11 mavhesi eBhaibheri erudo rwaMwari